Fleury Rakotomalala : Torian’i Patrick Raharimanana - Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2019 → septembre → 4 → Fleury Rakotomalala : Torian’i Patrick Raharimanana
Eo anivon’ny fitsaràna malagasy sy ny fitsaràna frantsay no nilazan’i Patrick Raharimanana fa hametrahany ny fitoriana an’i Fleury Rakotomalala. Io farany izay tsy mitsahatra ny miditra amin’ny tambajotra sosialy ary mitantara toe-javatra maro izay mahakasika ny fiainam-pirenena, indrindra tamin’ny vanim-potoanan’ny tetezamita. Tamin’ity indray mitoraka ity dia ny famoahana vaovao momba ny depiote vavy izay tsy hita ankehitriny rehefa karohin’ny fitsaràna no nampifanolana azy roalahy izay samy mahery fo amin’ny tambajotra sosialy ary samy arahin’ny olona maro ny tantara izay havoakany amin’ny aterineto. Ny iray eto Madagasikara ary ny toriana kosa dia ao Lafrantsa. Io farany dia hotorian’itsy voalohany noho ny fanalam-baràka, ny fanaovana hosoka ary ny fanendrikendrehana amin’ny zavatra tsy marina. Ny toe-javatra toa izao dia manaporofo hatrany fa tena mampiady ny tambajotra sosialy ary tsy dia tena ny ady an-dalambe intsony no maro mandeha any amin’ny fitsaràna ankehitriny fa ny fisintomana lakolosy isan-karazany eny amin’ny aterineto. Mizotra mankany amin’ny fanakorontanana saim-bahoaka ankehtiriny ny fandrosoan’ny teknolojia raha tsy mipetraka tsara ny arofanina amin’ny fampiasàna izany.
Baleda charles 4 septembre 2019 at 19 h 44 min · Edit
Inona moa no tokony hatao mba hisian’ny fitondrana mangarahara ,raha toa ka lazaina ho fanaratsiana dia toriana amon’ny tribunal izay manankolaeaina. MOMBA IZAY HITANY?Angaha tsy misy ny DROIT DR REPONSE dia anjaran’ny mpamaky ny MANDREFY IZAY FIHETSIKANY.?
Fa tsy isaky izay mihetsika dia. CYBERTCRIMINALITÉ,,TRIBUNAL, REPRESSION?Sa hiverina amin’ny fotoanan’nu COLONISATION indray izay niasa mafy ireo INDIC(DEX ho’zahay ramin’izany) malagasy sy vazaha niaron’ny tombontsoan’izay akaiky fitondrana ???
Tsinjo 4 septembre 2019 at 13 h 59 min · Edit
Ka any France anie sarotra ny manameloka olona amin’ny zavatra nosoratany eny @ internet. « Apologie du terrorisme » angaha ka hampigadra. Ny firenena mahantra toa antsika no mandany andro amin’ny ady tsy misy dikany, satry hoporitina foana ny vahoaka sy hovarianina amin’ny zavatra tsy mitondra aiza. Dia terena hoe tsy mahazo manaratsy (ny fitondrana) @ internet.
Brandon 4 septembre 2019 at 11 h 39 min · Edit
Izay ilay ataon’ny filozofia malagasy hoe : « mivadika ati-doha ».
Tsy ny Hasina sy ny sisa intsony no eny ambony, fa ny vola no mivadika ho lolohavina.
Ny loha dia lasa tsy loha ary ny tsy loha no atao loha !
Alfred 4 septembre 2019 at 7 h 50 min · Edit
Misy porofo mivaingana hitan’ny mpisera rehetra izay manambara fa chantage sy extorsion de fond ilay izy.
Ny fanontaniana mipetraka dia hoe marina ve io sa tsia ?
Ankoatr’izay dia mampalahelo fa hita mazava fa tsisy éthique ny mpanao politique malagasy ary tsisy fitiavan- tanindrazana izany fa ny vola ihany no tompohina .
Mivadika daholo nohon’ny fitadiavana ny tombotsoany manokana.